“ပိုကောင်းတဲ့ ‘ကား’ တစ်စီးကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲ”
ဒါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ကားထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံး ဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားနေကြတဲ့ မေးခွန်းတစ်ခုပါ။
TOYOTA GAZOO ကားမောင်းပြိုင်ပွဲရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကတော့
“အမြဲပိုကောင်းတဲ့ ကားတွေဘယ်လိုတည်ဆောက်ရမလဲဆိုတာကို လမ်းမတွေပေါ်ကပဲ သင်ယူနိုင်တယ်။”
ဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Toyota5Continents Drive Project ရဲ့စတင်ရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ဟာ အခုစီမံကိန်းကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း သြစတြေးလျမှစတင်ခဲ့တာပါ။ ဒီစီမံကိန်းအတွင်း Toyota ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သမုဒ္ဒရာဇုံ၊ အာဖရိက၊ ဥရောပ၊ အမေရိကနဲ့ အာရှ တိုက်ကြီးငါးတိုက်မှာရှိတဲ့ အခြေအနေအမျိုးမျိုးနဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာ မော်တော်ယာဉ်တွေကို မောင်းနှင်ကြပါတယ်။ ၂၀၂၀ တိုကျိုမှာကျင်းပမယ့် အိုလံပစ်နဲ့ မသန်မစွမ်းသူများအားကစားပြိုင်ပွဲအထိပါပဲ။ Toyota ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ သာမန်စမ်းသပ်လမ်းတွေပေါ်မောင်းနှင်ရာမှာ မရရှိနိုင်တဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ကြမ်းတမ်းလှတဲ့ လမ်းအခြေအနေတွေများစွာအပေါ်မှာ ကိုယ်တိုင်မောင်းနှင်ပြီး ရယူကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ရဲ့ ယုံကြည်ချက်ကတော့ ‘လမ်းတွေက လူတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတယ်၊ လူတွေက ကားတွေ တည်ဆောက်ကြတယ်’ ဆိုတာပါပဲ။ ဒီစီမံကိန်းတွင်း အခက်အခဲများစွာကို ရင်ဆိုင်ရင်းက Toyota ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ ဗဟုသုတ၊ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ သူတို့အတွက် မဖြစ်နိုင်လောက်စရာကို ဘယ်လိုကျော်ဖြတ်မလဲဆိုတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ရရှိလာပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ လက်တွေ့သင်ယူရရှိလာမှုတွေဟာ Toyota အတွက် ‘အမြဲပိုကောင်းတဲ့ ကားတွေ’ ဖန်တီးနိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ရရှိနိုင်စေတဲ့အပြင် ဒီရည်မှန်းချက်အတိုင်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကနေ လူသားရင်းမြစ်ကိုလည်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေမှာပါ။ အာရှခရီးစဉ်ဟာ5Continents Drive Project ရဲ့ နောက်ဆုံးအဆင့်ပါပဲ။ ဒီလိုဖြတ်သန်းမောင်းနှင်ရင်းက ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် ကြုံတွေ့ရမယ့် မတူကွဲပြားတဲ့ လမ်း၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ဒေသအလိုက် ယဉ်ကျေးမှုအမျိုးမျိုးကနေပြီး Toyota ရဲ့ ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဟာ
“ပိုကောင်းတဲ့ ‘ကား’ တစ်စီးကို ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မလဲ” ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဖြေဆိုဖို့ကြိုးစားကြမှာပါ။
အခု အာရှစီမံကိန်းကနေပြီး Toyota ရဲ့ အဓိကပေးချင်တဲ့ သတင်းစကားကတော့ ‘ဒီနေ့နဲ့ မနက်ဖြန်အတွက် အမြဲပိုကောင်းတဲ့ကားတွေကို အတူတကွတည်ဆောက်ကြမယ်’ ဆိုတာပါ။ အတူတကွလို့ဆိုရာမှာ အာရှမှာရှိတဲ့ Toyota ရဲ့ဖောက်သည်တွေ၊ အကျိုးတူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သူတွေ၊ အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ အစုရှယ်ယာရှင်တွေ အားလုံးပါဝင်ပါတယ်။ ဒါကနေမှ Toyota ဟာ ‘အမြဲပိုကောင်းတဲ့ကားတွေတည်ဆောက်ဖို့’ အတွက်ထိုးထွင်းသိမြင်ဉာဏ် ကြွယ်ဝလာနိုင်မှာပါ။ ဒေသအလိုက် လိုအပ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ ‘ယနေ့ ဖြေရှင်းချက်တွေ’ ဖြစ်ကြတဲ့ IMV (Innovative Internaional Multi-Purpose Vehicle) ၊ Q.D.R. (Quality, Durability, Reliability) နဲ့ စီးပွားရေးရာကွန်ယက်တွေမှာ Toyota ဟာပို၍ပို၍ ခိုင်မာအားကောင်းလာပါပြီ။ ‘မနက်ဖြန်အတွက် ဖြေရှင်းချက်’ တွေဖြစ်ကြတဲ့ ပြဿနာရှိရာအရောက် ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ အနာဂတ် စိတ်ချလုံခြုံရေးနည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်း Toyota မှာက ခိုင်မာတဲ့ ရည်မှန်းချက်နဲ့အတူယုံကြည်မှုကလည်း အပြည့်အဝနဲ့ပါ။ အခုဒီစီမံကိန်းကဆိုရင် Toyota ဟာ စီမံကိန်းအတွင်းပါဝင်ကြတဲ့ ကားမောင်းသူဝန်ထမ်းတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနဲ့ တခြားဝန်ထမ်းတွေသာမက အတွင်း/အပြင်က အစုရှယ်ယာရှင်တွေရဲ့ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်ကိုပါ ရည်စူးထားတာပါ။ မောင်းနှင်မှုအဖွဲ့ဝင်တွေဟာ သူတို့ရရှိလာတဲ့ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေကို ဌာနတွင်းအစီရင်ခံမှုတွေကနေသော်လည်းကောင်း၊ apps များမှသော်လည်းကောင်း၊ အခြားသောနည်းလမ်းများမှသော်လည်းကောင်း မျှဝေသွားကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ဟာ ဒီစီမံကိန်းကို မြှင့်တင်ရင်းကနေ ‘အမြဲပိုကောင်းတဲ့ကားတွေ’ ဆိုတဲ့ စိတ်ဓါတ်ကို ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီကို ရရှိစေပြီး ပိုမိုခိုင်မာအားကောင်းလာကြပါလိမ့်မယ်။
5C အဖွဲ့သားတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ရန်ကုန် > နေပြည်တော် > မန္တလေး လမ်းကို လက်တွေ့စမ်းသပ်မောင်းနှင်ရင်းကတစ်ဆင့် မြန်မာလမ်းတွေအပေါ်မောင်းနှင်ရခြင်းရဲ့ အတွေ့အကြုံကို ခံစားရယူသွားကြမှာပါ။ သေချာတာတစ်ခုက ဒီလိုမောင်းနှင်ရင်းကနေ မြန်မာ့လမ်းတွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ကားတစ်စီးကို ဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာကို 5C အဖွဲ့သားတွေ တွေ့ကြုံသိရှိလာ ကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်ကို ညွှန်းဆိုတဲ့အနေနဲ့ Toyota ဟာ ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို ဖန်တီးထားပါတယ်။ အဲဒါကတော့
“မြန်မာ့နှလုံးသားကို ခံစားနားလည်ခြင်း” ဆိုတာပါပဲ။
မြန်မာနှလုံးသားကို နားလည်ခံစားဖို့အတွက်5Continents Drive Project ရဲ့ မော်တော်ယာဉ် ၉ စီးဟာ အခြားလိုက်ပါပို့ဆောင်တဲ့ ယာဉ်တန်းနဲ့အတူ Toyota Aye and Sons မှနေပြီး အောက်တိုဘာလ ၁ ရက် နံနက် ၈:၅၀ မှာ ဖွင့်ပွဲနဲ့အတူ စတင်ထွက်ခွာခဲ့ကြပါတယ်။ သူတို့ဟာ Toyota Aye and Sons မှာ ဖွင့်ပွဲကျင်းပခဲ့ကြပြီးနောက် Toyota Mingalar ထံကိုသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်။ ခရီးစဉ်မှာ ပါဝင်တဲ့ မော်တော်ယာဉ် ၉ စီးအတွင်းမှာ အပြာရောင် Hilux တစ်စီးပါ ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကတော့ Toyota5Continents ယာဉ်တန်းအတွက် အထူးကားဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအပြာရောင် Hilux ရဲ့မှန်ပြတင်းပေါ်မှာတော့ Toyota Motor Corporation ရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူ Akio Toyoda ရဲ့ smile ဆိုသော စာလုံးနဲ့ လက်မှတ်ကို အားလုံးက တွေ့မြင်ကြရမှာပါ။ ဒါကတော့ Toyota ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌကနေပြီး ဖေါက်သည်တွေကို ဖြန့်ဝေလိုက်တဲ့ Akio Toyoda ရဲ့ ခံစားချက် သို့မဟုတ် အပြုံးပုံရိပ်ပါပဲ။
5C အဖွဲ့သားတွေဟာ အောက်တိုဘာလ ၂ ရက်နေ့မှာတော့ နေပြည်တော် ရွှေကြာပင်ရှိ Pit and Go ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး After Service နဲ့ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍကိုသွားရောက်လေ့လာခဲ့ကြပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ ၃ ရက်နေ့မှာတော့ မန္တလေးက GW Lion ကိုရောက်ရှိခဲ့ကြပြီး ပိတ်ပွဲအခမ်းအနားကို အောင်အောင်မြင်မြင်ကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ GWL မှာကျင်းပတဲ့ပွဲမှာတော့ Toyota အဖွဲ့သားတွေဟာ ဝယ်ယူအားပေးသူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီး ဝယ်ယူအားပေးကြသူတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို သိနားလည်စေဖို့ကြိုးစားခဲ့ကြတာပါ။
TMC Gazoo Racing (GR) ရဲ့5Continents Drive Project မစ်ရှင်ကနေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ မော်တော်ယာဉ်တွေထုတ်လုပ်ဖို့ အလားအလာအတွက် ဗဟုသုတနဲ့ အတွေ့အကြုံကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရရှိမှာ ဖြစ်တဲ့အပြင် ပါဝင်တဲ့ Toyota ရဲ့ သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေအတွက်လည်း ‘Genchi Genbutsu’ စိတ်ဓါတ်ရဲ့ အနှစ်သာရကိုလည်း ရရှိနိုင်မှာလို့ Toyota ကယုံကြည်ပါတယ်။ ‘Genchi Genbutsu’ ဆိုတာကတော့ ‘ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ သွားရောက်စူးစမ်းလေ့လာခြင်း’ လို့အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ဥပဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာ ပိုမိုလျင်မြန်ထိရောက်စေဖို့ပြဿနာရှိရာနေရာနဲ့အခြေအနေကိုတိုက်ရိုက်သွားရောက်လေ့လာခြင်းပါပဲ။
ဒါဟာ အမြဲပိုကောင်းတဲ့ ကားတွေတည်ဆောက်ဖို့အတွက် Toyota ရဲ့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ လက်တွေ့စူးစမ်းလေ့လာခြင်း (‘Genchi Genbutsu’) လည်းဖြစ်ပါတယ်။ Toyota ဆိုတာကိုက ‘ကားမြတ်နိုးသူတွေ စုပေါင်းပြီး ကားထုတ်လုပ်တာ’ ပါပဲ။ ဘာအတွက်လည်းဆိုတော့
“အမြဲပိုကောင်းတဲ့ ကားတစ်စီးရရှိနိုင်ဖို့” ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။
“What makesacar ‘better’?”
This isaquestion which the automobile manufacturer of the whole world are trying to answer every time.
TOYOTA GAZOO racing believes
“On the road we learn how to make ever-better cars.”
This is the starting point of Toyota5Continents Drive Project. Toyota started this project in Australia in 2014. In this project, Toyota employees drive vehicles under various conditions of5continents - Oceania, Africa, Europe, Americas and Asia - through 2020 when Olympic Games and Paralympic Games Tokyo 2020 will be held. Toyota employees will put themselves behind the wheel under harsh road conditions to gain experiences and knowledge that cannot be gained simply from driving cars on test courses. Toyota believes ‘roads train people and people make cars’. Facing many challenges in this project, the employees will acquire knowledge, skill and attitude to overcome the impossible things they face. What they learn will enable Toyota to create ‘ever-better cars’ and to develop human resources in support of that goal. Asia is the last stage of Toyota5Continents Drive project. As the team of Toyota employees travels the diverse roads, environments and cultures of the region, trying to answer the question:
In this project in Asia, Toyota’s key message is ‘Making ever-better cars TOGETHER - for TODAY and TOMORROW’. TOGETHER with all of Toyota customer, partners, members and stakeholders in Asia, Toyota can getawealth of insights for ‘making-ever-better Cars’. Toyota will strength TODAY’s solution suited to regional needs: Innovative International Multi-Purpose Vehicle (IMV), Quality, Durability, Reliability (QDR), Business network. Toyota will also aim to get confidence for their TOMORROW’s solution: Mobility services, Future safety technologies. In this project, Toyota aims to not only develop employees who are behind the wheel but also inspire other employees and internal/external stakeholders. The driving teams will share their knowledge acquired with other employees through internal reports, apps and others. Toyota will strength each employees’ mind of ‘ever-better cars’ by promoting this project internally.
By driving through the Yangon > Naypyitaw > Mandalay roads in Myanmar practically, 5C team can take the lots of experiences, the experiences how to make better car for Myanmar. To represent this activity, Toyota created the slogan-
“Feel the Heart of Myanmar."
To ‘feel the heart of Myanmar,’5Continents Drive Project’s9vehicles embarked from Toyota Aye and Sons with convoy at October 1, 2019, 8:50 A.M. They held the opening ceremony at Toyota Aye and Sons and visit to Toyota Mingala. Among participated x9 vehicles, there is one blue Hilux. It isaspecial vehicle of the convoy of the Toyota5Continents. On the surface of the blue Hilux window, there is “smile” which Akio Toyoda, President of Toyota Motor Corporation signed. This is the expression of his feeling that TOYOTA will deliver “smile” to customers.
On 2nd October, 5C members arrived at Naypyitaw and visited to Pit and Go Shwe Kyar Pin for understanding “After Service/Maintenance.” They arrived at Mandalay on 3rd October and held the closing ceremony successfully at GW Lion. In this ceremony, 5C members met with GWL’s customers for understanding further consumers’ insight/hidden demands.
The mission of this5Continents Drive Project by TMC Gazoo Racing (GR) is to gain an in-depth knowledge and experience on the potential product improvements and by involving the relevant Toyota staff, bringing out the ‘Genchi Genbutsu’ spirit. ‘Genchi Genbutsu’ is the Japanese principle of going to and directly observingalocation and its conditions in order to understand and solve any problems faster and more effectively. The phrase literally translated means ‘go and see yourself’ and isapart of the Toyota way philosophy. Toyota tried to leverage this knowledge to enhance automotive development.
This is the “Genchi Genbutsu” of Toyota to make better car. Toyota means ‘company of cars guys making car.’ For what?
“To make ever-better car.”